Osimiri Orinoco. Mkpa, ụtụ na ọnụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-eweta osimiri a maara nke ọma n'ụwa niile maka ịbụ osimiri kachasị na Venezuela. Ọ gbasara Osimiri Orinoco. E nwere akụkọ ifo dị iche iche kachasị adọrọ mmasị banyere osimiri a nke ọnụnọ nke nnukwu anụ na ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya na-emetụta. O nwere nnukwu mineral, ihe omumu na mmiri ma na ekele ya mmepeanya gbara ya gburugburu.
Anyị na-akọwa ihe niile metụtara Osimiri Oricono.
1 Ebe na ogologo
2 Mkpa Osimiri Orinoco
3 Ọnụ na ụtụ
4 Ọnọdụ obibi na akụ na ụba
Ebe na ogologo
Aha osimiri Orinoco sitere na otu n'ime agbụrụ ụmụ amaala ochie nke Venezuela. Obodo a apụla n'anya taa n'ihi ide mmiri ahụ mere kemgbe ọtụtụ afọ.
A chọtara ya, dị ka anyị kwurula, na Venezuela na steeti a maara dị ka Amazonas. Ọtụtụ Osimiri Guavire na-emetụta ọtụtụ mpaghara ebe a, na ókè-ala Colombia. A na-ewere ya dịka osimiri kachasị ukwuu na mba niile. N'ikpeazụ ya, ọ na-eso Osimiri Amazon n'ọnụ ya.
Osimiri a dị ike nwere kilomita 2.140 n'ogologo a na-ewere ya ọ bụghị naanị osimiri, kama ọ bụ usoro n'ozuzu ya. Ọ bụrụ na anyị na-eburu n'uche njikọ nke Guavire, ngụkọta ogologo bụ kilomita 2.800. Nke a mere ka ọ bụrụ otu n’ime nnukwu osimiri dị n’elu ụwa dum.
Ndagwurugwu ya buru ibu nke na mgbe achọpụtara ya, a na-eche na ọ bụ oke osimiri. Oke efere ndị ahụ dịkwa oke ma buru nnukwu mmiri. Osimiri Orinoco nwere ihe karịrị obere osimiri 436 na mmiri iyi 2000. Mmiri ndị a bụ onyinye mmiri nke na-abịa na ndagwurugwu ma na-enye aka na mmụba nke ngụkọta zuru oke ọ na-eburu. Mmiri niile na-asọba n’Oké Osimiri Atlantik.
Ọnụ ọgụgụ nke basin ahụ siri ike ịlele, mana a na-eme atụmatụ na ọ nwere ngụkọta nke kilomita 990.000, nke 643.480 km2 dị na Venezuela. Akụkụ nke ọdọ mmiri a mere ka ọ bụrụ nke atọ kachasị na South America niile.
Mkpa Osimiri Orinoco
Efere ahụ nwere nnukwu mkpa na Venezuela, ọ bụghị naanị na akụkọ ihe mere eme, ma na-ekpuchikwa akụkụ dị iche iche nke akụ na ụba. Ọ ghọrọ otu n'ime mmiri ndị jere ozi n'oge a niile maka ịgagharị ụdị ngwaahịa dị iche iche bufere maka oriri sitere na obodo gaa n'obodo ọzọ. N'ihi nke ahụ, Ọ ga-ekwe omume ịgbasa obodo ndị na-edozi gburugburu osimiri ahụ wee si otú a mee ka ọnụọgụgụ ndị a na ebe ndị a.
O nwekwara nnukwu ihe omumu nke obibi ebe enyere ya na o nwere otutu ebe nke nwere otutu anumanu na osisi. Ebumnuche nke obibi na ụba dị n'ụba na ihu igwe bara ụba ọ nwere. Enwere ọtụtụ akwụkwọ nri na-echekwa ebe ahụ n'ihi ekele ndị njem ya. Dị ka a ga-atụ anya ya, ihe okike na-enweta uru akụ na ụba ya kachasị elu mgbe enwere ike ịmepụta ọrụ akụ na ụba ndị ọzọ na ya. Dịka ọmụmaatụ, mpaghara dị iche iche echedoro nwere ego ntinye ma si otú ahụ nweta ego ma bulie uru ha. Ya mere, n'ozuzu ha ha na-eme Osimiri Orinoco nwere nnukwu uru n'akụkụ niile.
Agbanyeghị, ugbu a, ka enyere ohere igwu olulu, mmetụta dị iche iche gburugburu ebe obibi amalitela ịpụta nke na-emebi uru gburugburu ebe obibi. Ọ bụghị naanị na enwere mmetọ ala, mbibi ebe obibi na mmebi mmiri, mana ha na-enyekwa aka na nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe, bụ nke Onye Ọchịchị nke El Niño.
Ọnụ na ụtụ
Ọ bụ Christopher Columbus dere ọnụ nke Orinoco na 1498. Osimiri Venezuelan bụ ndị na-anabata ọtụtụ ọnụ mmiri. A na-etolite Delta site na ihe karịrị kilomita 300 nke ụsọ oké osimiri. Nke a dị oke mkpa na ọtụtụ n'ime ihe omumu banyere ala ha na-eme ihe iji gbanwee enyemaka nke otu.
Ọnụ ahụ na-esi na Punta playa gafee mpaghara ọwụwa anyanwụ ruo mpaghara Boca Bagre. N'ịbụ nke dị ukwuu, ndị nyocha mbụ nke Columbus chọtara onwe ya nwere obi abụọ ma ha achọpụtala osimiri ọhụrụ. Ọ nwere ihe karịrị ọwa 300 na Delta dị ike nke ọ na-etolite nwere nha 30.000 km2.
Gị zuru ezu njem na-amalite na Venezuelan Amazon na kasị elu ebe nke Amazon State. Mgbe ọ rutere n’otu ebe akpọrọ La Esmeralda ọ sonyere Osimiri Casiquiare wee gaa njem narị kilomita abụọ na iri iteghete ebe Osimiri Negro na-esonye, ​​nke bụkwa ụtụ nke Amazon.
Otu n’ime isi iyi ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ Osimiri Ventuari nke na-amalite njem na obodo San Fernando de Atabapo. Ọ bụ ebe ahụ ebe ọ malitere ị nweta mmiri nke Osimiri Guavire, nke a kpọtụrụ aha n'elu wee kaa oke ala dị n'etiti Venezuela na Colombia. Ndị ọzọ kachasị ama ama na-enye aka na Osimiri Orinoco bụ Caura-Merevari, Caroní-Cuquenán, Vichada, Meta na Arauca.
Ọnọdụ obibi na akụ na ụba
Ebe ọ bụ na a na-erigbu ọtụtụ akụkụ nke osimiri a maka akụ, na-ewe nnukwu mkpa na akụ na ụba na nke obibi. A na-eji oke ohia eme ihe n'ụzọ dị ka iji nweta akụ nke mineral dịka nchara na aluminom.
A na-enwetakwa ebe ndị a na-erigbu ebe Orinoco dabara na mmiri ndị ọzọ dị ka Caroní na Cerro Bolívar. N'ebe ndị a, e nwere nnukwu ígwè nke na-arụ ọrụ iji melite ụlọ ọrụ na mpaghara ahụ.
Enwekwara oke mmịpụta n'akụkụ aka ekpe, n'akụkụ n'akụkụ steeti Monagas na Anzoátegui. A na ebuga mmanu a n’obodo El Tigre ebe eji ya. Wayzọ esi ebufe mmanụ site n'otu ebe gaa na ebe ọzọ na-eme site na pipelines dị iche iche.
N'ihi nnukwu nnubata nke Osimiri Orinoco, obodo ukwu enwewo ike iwu ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ na ebe ndị na-egwu mmiri ebe a na-eme atụmatụ atụmatụ nrigbu akụ na ụba
Dịka ị pụrụ ịhụ, Osimiri Orinoco dị oke mkpa n’ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Osimiri Orinoco
Ọ bụ mpako ịbụ VENEZUELAN ogologo ndụ Venezuela na akụ na ụba ya